Dr. Cali Khaliif Galeydh oo ka deyriyay dastuurka iyo qaabka wada hadalka Somaliland iyo xukuumadda kmg ah | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Dr. Cali Khaliif Galeydh oo ka deyriyay dastuurka iyo qaabka wada hadalka Somaliland iyo xukuumadda kmg ah
Nayroobi, April 15, 2012 (WDN) – Raysal wasaarihii hore ee xukuumaddii kmg ahayd ee Soomaaliya ee lagu soo dhisay magaalada Carta ee dal Jabuuti Dr. Cali Khaliif Galeydh ayaa ka digay in lagu degdego dastuurka dalka loo sameynayo. Md. Galaydh waxa uu ku baaqay in ay ku wanaagsan tahay in wadatashiga intaa laga ballaariyo, mudnaantana la siiyo xilligan hadda lagu jiro nabadeynta iyo dejinta dalka.
Md. Cali Khaliif, oo wareysi gaar ah ku siiyay WardheeNews magaalada Nairobi ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrinka dastuurka oo ah wax weyn in si feejigan looga fakaro islamarkaasna aan lagu degdegin meel marintiisa. Waxa uu intaas ku daray in marka hore loo baahan yahay in xoogga la saaro dejinta iyo nabadeynta dalka, marka dalka la dejiyona loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ka tashadaan.
Dr. Cali Khaliif Galeydh oo dhinaca kale ka mid ahaa aas’aasayaashii maamulka Khaatumo State of Somalia ee goballada Sool, Sanaag iyo Cayn, ayaa sheegay in aqoonsiga caalamiga ah ee maamulkaasi ay meel wanaagsan mareyso. Waxa uu sheegay in Nairobi ay kulamo kula qaateen beelaha Soomaaliyeed iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, ayna isla meel dhigeen waxyaabo badan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay ku talo jiraan in ay aadaan dalalka kale ee Uganda, Burundi, Tanzania iyo kuwa kale oo qaddiyadda Khaatumo ay kala hadli doonaan.
Dhinaca Somaliland, ayuu sheegay Cali Khaliif in ay wada hadal ugu baaqayaan, isaga oo intaas ku daray in dhowr jeer oo hore la isku dayay in la wada hadashiiyo Somaliland iyo Khaatumo, hasa yeeshee arrintaasu ka socon weyday dhinaca maamulka Somaliland.
“Annagoo Itoobiya joogna, ayuu Raysal wasaaraha Itoobiya isku dayay in uu na wada hadashiiyo madaxweynaha Somaliland oo isna markaa meesha joogay, laakiin waxa uu sheegay inuusan diyaar u aheyn in uu nala hadlo, ama uu kaliya nagula hadli doono sida dowlad iyo shacabkeeda oo wada hadlaya” ayuu yiri Cali Khaliif.
Waxa uu Cali Khaliif aad ugu ku celceliyay in aanay suurtogal ahayn in ay iyagu qaddiyaddooda marti ka noqdaan.
Socdaal bilo ka hor ay Itoobiya ku tageen, ayuu Cali Khaliif sidoo kale sheegay in ay salka ku heysay sidii ay dowladda Itooboiya ay ugala hadli lahaayeen in maamulkan Khaatumo aanay wax khatarah ku aheyn Itoobiya iyo dalalka kale ee la dariska ahba.
Dhinaca wadahadalka Somaliland iyo TFG da ee aayaha waddanka, ayuu Md. Cali Khaliif ka digay in la dhayalsado oo la soo koobo. Waxa uu sheegay in ay habboon tahay, loona baahan yahay in aad looga fiirsado arrintan. Md. Cali Kahliif waxa uu tilmaamay in qodobada laga hadlayaa ay yihiin arrimo ku saabsan kala go’a iyo qaybinta Soomaalida. Taas oo uu sheegay in aanay 4 nin ama 5 qof oo qol madow isku xidhay ka talo bixin karin.
Waxa kale oo Cali Khaliif Galaydh su’aal ka keenay cidda ay Somaliland matalyso. Taas oo uu sheegay in bal marka hore loo baahan yahay in la qeexo.
Wareysigan oo maqal ah, taabanayana arrimo muhiim ah isaga oo dhameystiran waxa aad dhawaan kala socon doontaan barnaamijka Raadraac ee Radio Wardheer.
Sirta Raadinta Raaxada Nafta Dowladda Ingariiska oo Somaliland ugu baaqday in ay wax la qeybsadaan Soomaaliya